SERIE A: JUV VS CAG 3-0…Juve oo ku badisay ciyaar taariikhda gashay + Sawirro – Gool FM
SERIE A: JUV VS CAG 3-0…Juve oo ku badisay ciyaar taariikhda gashay + Sawirro
Raage August 19, 2017
(Torino) 19 Agoosto 2017 – Juventus ayaa 3-0 ku xaaqday kooxda Cagliari kulan-bilowga horyaalka Talyaaniga, balse Gigi Buffon ayaa badbaadiyay rigoorihii ugu horreeyay ee Serie A lagu dhigo hannaanka VAR.
Mario Mandzukic ayaa dhaliyay goolkii 1-aad ee fasal-ciyaareedka, isagoo raaciyay dadab uu soo dhigay Stephan Lichtsteiner, halka ay goolasha kale ku qaaraameen Paolo Dybala iyo Gonzalo Higuain.
Kulankan ayaa taariikhda galay kaddib markii Alex Sandro uu tafay Duje Cop kaasoo uu kaliya arkay hannaanka Muuqaalka Kaalinta Garsoorka ee Video Assistant Referee, balse Buffon ayaa rigoorihii la dhigay ka duubay Diego Farias, taasoo ah rigooradii ugu horreeysay ee qaabkan lagu dhigo.
Juve ayaa sidoo kale kulan-bilowgoodii Serie A saftay laacibiinta Blaise Matuidi iyo Douglas Costa, iyadoo qaybihii dambe tijaabisey shaxda 4-3-3.
Bal adigu DAAWO oo go'aami, Garab dhaaf miyuu ahaa goolkii Lacazette?
DAAWO: Koox qaab cajiib ah cabsida ula dagaallanta ciyaar kasta ka hor!!